Ny fanadihadiana dia tokony hifototra amin’ny famatsiam-bola; ny vokany eo amin’ ny lafiny sosialy sy ara-toekarena mialoha, mandritra ary aorian’ny tetikasa; ireo mponina hisitraka sy hiharan’ny tetikasa… Mampieritreritra tokoa ny fanambarana nataon’ny tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI) farany teo. Na dia tsy voatery manao tatitra na maka hevitra amin’ny FMI dia mahagaga ihany ny tsy fahatantaran’izy ireo ny pitsopitson’ny tetikasan’ny fanjakana amin’ny findramam-bola kasaina hatao amin’ny CNaPS entina hamatsiana ireo toeram-ponenana. Io tsy fahampiana fanazavana io dia midika fa tsy nisy fanadihadiana lalina. Toy izany koa ireo tetikasa goavana: Tanàmasoandro sy Miami izay tsy mazava amin’ny mponina. Toy izany ihany koa ny tombony ara-tsosialy sy ara-toekarena. Noresahina ny famoronana asa saingy tsy mijanona amin’izany ihany. Inona no fiantraikany mivantana avy amin’ny Tanamasoandro eo amin’ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toekarena, ny fifamoivoizana ary ny fifamezivezena eto Antananarivo sy ny manodidina, ireo tombony ara-toekarena ho an’ny renivohitra sy ireo hisitraka trano eo anivon’ity tanàna vaovao ity ? Hatreto, mbola mangingina ny minisitera misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Tsy mbola misy fanendrena tale raha ny filankevitry ny ministra sy governemanta farany teo no jerena.